Xildhibaanno si deg-deg ah u dalbaday in jawaab laga bixiyo dadkii lagu laayay Sh/Hoose | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Xildhibaanno si deg-deg ah u dalbaday in jawaab laga bixiyo dadkii lagu...
Xildhibaanno si deg-deg ah u dalbaday in jawaab laga bixiyo dadkii lagu laayay Sh/Hoose
Sh/Dhexe (Halqaran.com) – Waxaa weli isa soo taraya dadka sida aadka ah uga hadlaya dhacdadii lagu dilay Hooyo iyo laba Carruur ah oo ay dhashay taas oo ka dhacday deegaanka Xaluule ee duleedka degmada Warsheekh ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Xildhibaan Cabduqaadir Caraboow iyo Mina Xasan Shibis oo labaduba ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa ay falkaasi ku tilmaameen mid arxan darro ah oo aan indhaha laga laaban Karin.
Shir Jaraa’id oo ay Warbaahinta ugu qabteen Magaalada Jowhar ayaa waxaa ay sheegeen in dilka arxan darrada ah ee loo geystay Hooyada iyo labada Carruurta ah aysan kaliya ku filneyn cambaareeyn, islamarkaana loo baahan yahay in si deg deg ah looga jawaabo oo wax looga qabto.
Xildhibaannada ayaa ugu baaqay Dowladda Federaalka Soomaaliya & Maamulka Hirshabeelle in tallaabo degd eg ah ay ka qaadeen dadkii ka dambeeyay dilkaasi foosha xun inta aysan dhicin xiisad kale iyo fidno kale oo ka dhalata arrintaas.
Ugu dambeyn, dhacdooyinka argagaxa leh ee dadka maatida lagu laynaayo ayaa ku soo badanaya deegaano iyo Degmooyin badan oo ka tirsan Gobolka Shabellaha Dhexe.
Hooyo iyo carruurteeda oo lagu laayay Shabeellaha Dhexe
jawaab deg deg